Welcome to Aayaha Nolosha » Urur u dooda xuquuqda Soomaalida Norway oo hambalyo 8-Marso u diray Haweenka Soomaaliyeed.
Urur u dooda xuquuqda Soomaalida Norway oo hambalyo 8-Marso u diray Haweenka Soomaaliyeed.
March 8, 2018 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Ururka xuquuqul insaanka Soomaaliyeed ee dalka Norway (Somali organization for human rights and integration Norway) fadhigiisu yahay Magaalada Oslo, ayaa hambalyo iyo boggaadin ku aadan 8-da Maarso xuska Maalinta Haweenka Adduunka u diray Haweenka Soomaaliyeed.
Mohamed Abdulkadir (Dirir) oo ah Guddoomiyaha Ururka xuquuqul insaanka Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay boggiisa Facebooka ayaa hambalyo iyo boggaadin ugu diray Haweenka Caalamka gaar ahaan Soomaalida ee ku kala nool guud ahaan Adduunka, isagoo ku booriyey inay sii xoojiyaan doorkooda muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed.
“Doorkiina waa mid muuqda tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyo waliba xiligii gumeysiga dalka uu ku jiray, waxaad halbowle u noqoteen caruurta iyo qoyska shaqo wanaagsan oo ay adag tahay inay Hooyo qabato ayaa qabateen idinkoo markaas ku jirtaan xaalado kala duwan…” ayuu yiri Mohamed Abdulkadir (Dirir).
Sidoo kale Ragga Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay u naxariistaan Haweenka isla markaana kala shaqeeyaan sidii ay wax u bari lahaayeen isla markaana noqdaan kuwo mar walba u muujiya dhiirigelin ay ku faanaan dumarka Soomaaliyeed.
“Diinteena iyo dhaqanka wanaagsan ee uu ALLE inoogu deeqay ayaa inoo iftiimineysa muhiimada haweenka, sidaasi darteed ragga Soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa inay mar waliba karaameeyaan, sharafaan ayna dhowraan xuquuqda Dumarka Soomaaliyeed”.
Ugu danbeyntii waxa uu Guddoomiyaha ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida ku nool dalka Norway (Somali organization for human rights and integration Norway), Mohamed Abdulkadir (Dirir) waxa uu sheegay in ururkiisa uu ku dadaali doono garab istaaga Haweenka Soomaaliyeed.